स्वास्थ्य/जीवनशैली Archives - Page2of6- कृषि पत्रिका
के हो निपा भाइरस ? नेपालमा महामारीको रुप लिन सक्छ -विश्व स्वाथ्य शंगठन
शुक्रबार ११ जेठ, २०७५
एजेन्सी। निपा भाइरस नेपालमा नि फैलिन सक्ने अनुमान विश्व स्वाथ्य शंगठनले गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको केरलामा फैलिएको अत्यन्तै संक्रामक निपा भाइरसले उपचारमा संलग्न नर्ससहित ११ जनाको ज्यान लिइसकेको छ। नेपाल पनि यो भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा छ तर यहाँ यो रोग भित्रिन नदिन तथा भित्रिइहालेमा नियन्त्रण गर्न कुनै पूर्वतयारी छैन । के हो यो रोग? […]
सोमबार १० बैशाख, २०७५
हामीले दैनिक जीबनमा प्रयोग गरिआएको धनिया तरकारी वा अचारको टेस्टको लागि प्रयोग गर्छौ । धनियाको बिया जमिनमा छरिदियो भने उम्म्रिदै आउछ र त्यसलाई जरैदेखि उखलेर दैनिक जीबनमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । हरियो धनिया मात्र नभई यसको बियालाई पानी पिसेर तरकारीलाई स्वादिष्ट बनाउन् सकिन्छ । धनियामा हुने पोषणहरुबारे तल केहि बुदा दिईएको छ : धनिया को बीजमा phytonutrients भन्ने पोषण […]
शाकाहारीले खानै पर्ने खानेकुरा
आइतबार ०२ बैशाख, २०७५
मासु मात्र प्रोटिनको एक मात्र स्रोत हो भन्ने सोच्नुहुन्छ रु तर मासु मात्र प्रोटिनको स्रोत भन्ने कुरा गलत हो । मासुबाहेक पनि यस्ता विभिन्न खानेकुरा छन् जो प्रोटिनका सर्वश्रेष्ठ स्रोत हुन् । मुख्यतः अमिनो एसिडबाट बनेका प्रोटिनले कोशिका र तन्तुको मर्मतका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् । जब शरिरमा प्रोटिनको कमी हुन्छ तब कोशिका र तन्तुका कार्यमा […]
बुधबार २१ चैत, २०७४
कर्कलोलाई गाभा पनि भनिन्छ । हाम्रो खेत बारि लगायत ओसिलो जंगल वा खोला किनारमा प्रसस्तै पाइने कर्कलोको बैज्ञानिक नाम चांहि कलोकेसिया एस्कुलिन्टा हो। यसलाई अंग्रेजिमा तारो भनिन्छ। पात डाँठ र जमिन मुनि हुने जरा, जसलाई पिडाँलु, भनिन्छ तरकारिको रुपमा उपयोग हुन्छ। कर्कलोका बिभिन्न जात हुन्छन् र सबै जात खान योग्य हुदैनन्। खान योग्य जात पनि […]
ग्रीन टी खाँदा के हुन्छ त ?
आइतबार ०४ चैत, २०७४
ग्रीन टीका बारेमा पछिल्लो समय सबैले सुन्दै र थाहा पाउँदै आएका छौँ। स्वस्थ्य रहनका लागि धेरै चिकित्सकहरु, योग गुरु तथा वैद्यहरुले समेत ग्रीन टी पिउने सल्लाह दिने गरेको पाइएको छ। सामान्यतया चीयाका बोटका नयाँ नटिपिएका मुनाबाट प्रशोधन नगरी बनाइएको चिया नै ग्रीन टी मानिन्छ। ग्रीन टीमा भएका तत्वहरुले मानिसलाई निम्न कुराहरुमा फाइदा पुर्‍याउँछ। ग्रिन टी […]
शनिबार ०३ चैत, २०७४
मानव स्वास्थ्यका लागि फलफूल निकै राम्रो मानिन्छ । शरिरका लागि प्रयाप्त पोषण फलफूलबाटै प्राप्त हुने भएकोले फलफूल बहुगुणी र उपयोगी छ । यसैले प्राकृतिक रुपमा रहेका पाकेका त्यस्ता फलफूले हामीलाई के फाइदा दिन्छ जान्नु आवश्यक छ जान्नुस्, फलफूलका विविध फाइदा: सुन्तला सुन्तलामा भिटामिन सी, पोटासियम र म्याग्नेसियम हुन्छ । सुन्तलाको प्रयोगले डिहाइड्रेसन तथा छालाको समस्याबाट […]
मङ्गलबार २९ फागुन, २०७४
एजेन्सी। ब्रोकाउलीको सेवनले क्यान्सर लगायतका रोगबाट बचाउने विभिन्न खाले अनुसन्धानले देखाएका थिए । तर पछिल्लो अध्ययनले भने ब्रोकाउली खाँदा मात्र होइन सरीरमा घस्दा समेत क्यान्सरबाट जोगिन सहयोग पुग्ने तथ्य पत्ता लगाएको छ । अनुसन्धानका अनुसार सरीरको छालामा ब्रोकाउली घसियो भने घामबाट डढेर हुने छालाको क्यान्सरको खतरा कम हुन्छ । अमेरिकाको एरिजोना क्यान्सर सेन्टर र जोन […]
स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ है चाउमिन-पिज्जा !
आइतबार २७ फागुन, २०७४
कतिपय मानिसहरु घरमा बनेको खानेकुरा भन्दा बजारमा भेटिने ‘रेडी टु इट फुड’ को शौखिन हुन्छन् । बजारमा पाइने मोनो सोडियम ग्लुटामेटको सेवन बढी मात्रामा गरिरहेका हुन्छन्। मोनो सोडियम ग्लूटामेट अर्थात एमएसजी स्वास्थ्यका लागि कति खतरनाक छ भन्ने धेरैलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। प्याकेटमा ‘नो एडेडे एमएसजी’ को लेवल देखेर कतिपय मानिसहरु यसलाई सुरक्षित मान्छन तर त्यसमा […]
शुक्रबार २५ फागुन, २०७४
मिर्गौलामा पत्थरीको समस्या आजकाल धेरै देखिन थालेको छ । खानपान तथा दिनचर्याका कारण आजकाल लाखौं मानिस यसको समस्या बेहोर्न बाध्य भइरहेका छन् । मिर्गौलामा पत्थरी हुँदा निकै पीडा हुन्छ । कतिपयमा यो आनुवंशिक समस्या पनि हुन सक्छ । पत्थरीलाई आजकाल अपरेशन गरेर सजिलै निकाल्न पनि सकिन्छ । तर केही घरेलु उपायबाट पनि पत्थरीबाट बच्न सकिन्छ […]
बिहिबार २४ फागुन, २०७४
एजेन्सी । केरामा भएका तत्वहरु तत्काल शरीरले ग्रहण गरीहाल्छ, यसलाई पाचनको लामो प्रकृयामा अल्झीनै पर्दैन ।यही पाकेको केरामा अत्याधिक पोषणतत्व पाइन्छ । केरामा आइरन, क्याल्सियम तथा भिटामिन प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । काँचो केरा खाँदा शरीरमा आइरनको पुर्तिमात्र गर्दैन, कयौ रोग लाग्नबाट बचाउँछ । काँचो केराका फाइदा : मोटोपनाको शत्रु : नियमती रुपमा काँचो केरा खाने […]